गृह जिल्लामै नराम्रोसँग पछारिय भिम रावल ? - Sampurnab Khabar
गृह जिल्लामै नराम्रोसँग पछारिय भिम रावल ?
२८ पुष २०७८, बुधबार January 12, 2022 by सम्पूर्णव
नेकपा (एमाले) अछामको मतगणना जारी रहेको छ । सुरुवाती गणनामा अध्यक्षका प्रत्या’सी चन्द्र बोहराले ५३ मतको अग्रता लिइरहेका छन् । उनी ओली पक्षबाट उम्मेदवार बनेका हुन् ।
एकसय मत गन्दा अध्यक्ष पदका अर्का प्रत्या’सी प्रकाश शाहले ४४ मत प्राप्त गरेको निर्वाचन समितिले जानकारी दिएको छ । शाह रावल पक्षबाट उम्मेदवार बनेका हुन् ।
बोहरा प्यानलको उपाध्यक्षमा भीमबहादुर विष्टले ३७ र शाह प्यानलमा उपाध्यक्षमा बलबहादुर कुँवरले ५६ मत पाएका छन् ।यस्तै सचिव पदमा बोेहरा प्यानलका आदर्श साउँदले २५ र शाह प्यानलका भीमबहादुर रावलले ६६ मत प्राप्त गरेका छन् ।उपसचिव पदका बोहरा पक्षका डम्बर बीसीले २७ मत, टोपबहादुर शाहीले २६ मत पाएका छन् ।
शाह प्यानलका उपसचिव प्रेम महरले ३७ र प्रेम खत्रीले २९ मत पाएका छन् । प्यानल बाहेक उपसचिवमा उम्मेद्वारी दिएका लिलाराज केसीले २४ नवराज साउँद १० र शेरबहादुर बुढाले नौ मत पाएका छन् ।
पदाधिकारीसँगै भूगोलको (स्थानीय तह), खुला, महिला, द’लित, जनजाति, अ’पांग, अल्प’संख्यकमा समेत दुई प्यानल बनाएर चुनावी प्रतिप’ष्पर्धा भइरहेको छ ।
मंगलबार बिहान ९ बजेबाट प्रारम्भ भएको मतदान राती ८ बजेतिर सम्पन्न भएको ७५० मत खसेको थियो । ९१ वडाबाट प्रतिनिधि र आयोजक गरेर ७६२ मतदाता रहेका थिए ।
एमाले अछाममा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र उपसचिवमा पाँच पदाधिकारीसहित एकसय ५ जना निर्वाचित हुनेछन् ।
तीन दिनदेखिको सहमतिको प्रयास अ’सफल भएपछि नेकपा (एमाले) अछामका निवर्तमान सचिवालय सदस्यद्धय अध्यक्ष पदमा चन्द्र बोहरा र प्रकाश शाहको प्यानलसहित चुनावी प्रति’ष्पर्धामा गएका थिए ।
नेकपामा वि’वा’द भएको समयमा बो’हरा ओली पक्षका जिल्ला अध्यक्ष र शाह प्रचण्ड–माधव समूहका जिल्ला उपाध्यक्ष थिए ।बोहरालाई केपी ओली पक्षबाट र शाह भीम रावल पक्षबाट प्यानलसहितमा चुनावमा गएका हुन् । शुक्रबार उद्घा’ट’न गरिएको अधिवेशन शनिबार बन्दस’त्र सम्पन्न गरिएको थियो ।
Prevएमालेले जस्तो लोकप्रिय सरकार संचालन गरे क्रान्ति सफल हुन्छ : पृथ्वी‌ सुब्बा गुरुङ
Nextकेपी ओली समूहले भीम रावललाई उनकै गृहजिल्लामा पछारे , गुमाए रावले आफ्नो साख